Mike Pompeo oo maanta soo bandhigi doono khariidad diblomaasiyadeed oo ku saabsan Iiran… – Hagaag.com
Mike Pompeo oo maanta soo bandhigi doono khariidad diblomaasiyadeed oo ku saabsan Iiran…
Posted on 21 Maajo 2018 by Admin in World // 0 Comments
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa Isniinta maanta ah uu soo bandhigi doonaa khariidad diblomaasiyadeed oo ku saabsan Iiraan, kadib markii uu jeediyo khudbadiisii ugu horeysay ee siyaasada arrimaha dibada tan iyo markii uu xafiiska la waregay 26 April 2018.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Heather Nauert ayaa sheegtay in Washington ay doonayso in ay dhisto isbahaysi caalami ah oo ka dhan ah xukuumadda Tehran. Waxay sharaxday in Maraykanku uu wadajir u keeni doono dalal badan oo caalamka ah ujeedo gaar ah, oo ah in la xakameeyo nidaamka Iiraan.
Pompeo ayaa la qorsheeyay in uu ka hadlo fikraddan Isniinta, halkaas oo uu si gaar ah uga hadli doono Iiraan iyo sidii loo sii wadi lahaa feylkeeda.
Heather ayaa sheegay in kormeerka Iiraan aysan ku koobnaan doonin dhinaca nukliyeerka, laakiin waxaa ku jiri doona dhammaan howlaha ay ku tilmaameen “xasillooni la’aanta” isla markaana ma aysan sheegin in isbahaysiga mustaqbalka ee ka hor imanaya xukuumadda Iiraan uu yeelan doono qayb ciidan.
Waxay sheegtay in Wasaaradda Arrimaha Dibada ay qaabishay 200 safiir ajnabi ah si ay ugu sharaxdo go’aanka Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo uu uga baxay heshiiskii nukliyeerka ee lala saxiixday Iiraan 2015-ka iyada oo la falanqeynayo tallaabooyinka xiga.
Wasiirka arrimaha dibedda Iran Mohammad Javad Zarif ayaa sheegay in taageerada siyaasadeed ee Europe ee ku aaddan heshiiska nukliyarka uu yahay mid aan ku filneyn. Intii uu ku guda jiray kulan uu la yeeshay guddoomiyaha guddiga EU ee dhinaca shidaalka iyo Cimilada Miguel Arias Kanthe ee Tehran, wuxuu sheegay in Midowga Yurub uu ku tallaabsado tallaabooyin wax ku ool ah oo ku saabsan xiriirka dhinaca dhaqaalaha iyo maalgashiga Iiraan.
Warbaahinta Iiraan ayaa ka soo xigatay Wakiilka Yurub, isaga oo sheegay in hoggaamiyayaasha Midowga Yurub ay fariin cad direen in Yurub ay ka go’an tahay heshiiska isla markaana ay ka shaqaynayso sidii loo ilaalin lahaa. Guddoomiyaha ayaa intaas ku daray in Midowga Yurub uu leeyahay rabitaan siyaasadeed oo xooggan si uu si adag uga shaqeeyo sidii ay u sii wadi lahaayeen shirkadaha Yurub ee ka shaqeeya gudaha Iran.